Safety na ezihlola Rubber zombane ukubuza imibuzo best? - Jomo Technology Co., Ltd
Safety na ezihlola Rubber zombane ukubuza imibuzo best?
Ngokumalunga kokuyilwayo le Rubber, usenokuba kufuneka ukucinga ezinye iinkalo zophuhliso yayo. Ukuba ungathanda ingcamango yokuba i Rubber zombane , kodwa wena umthande setup wakho, kufuneka uthathe ujongo kwi Eon: i powertrain zaseprayimari seemodyuli zombane. Kweli hlabathi ekhawulezayo komfundi efana neyethu, isantya ixabiso kuxhome izinto into ebalulekileyo ngokwemiqathango zokuhamba. Yiyo leyo. Kodwa ezifana nemoto, uqina kwaye ziyahluka zibalulekile Ukongezelela, kuba awukwazi nje ukukumisa phakathi futhi babize phakathi kwendlela. Ukongezelela, ukuba uthe wawa ukuya emazantsi, umqulu ude uyeke ukuba kude zifika. Kuba bazilungiselela nge kude ephathwayo ekuvumela ukuba uqala, ukuwumisa iyayitshintsha uqina, kwaye iindlela ezimbini ukulungiselela abathengi ezintsha okanye abanezakhono. Kulula ukubona isizathu sokuba le miba kakhulu kuchaphazela bako kunye nokusebenza. Yeyona i iqabane elisemagqabini adventures ngaphandle kwendlela, nangona kunjalo ukuba clunky kakhulu ukuba nzinyana kusetyendziswa eqhelekileyo.
Ngoko ke esikhulu kangaka ezimbalwa Rubber yombane? Unako kwakhona ukufumana phandle i ulawulo ekude kunye Rubber yakho aqhutywa umbane. I Inboard yaba isuntswana kwicala onzima kodwa i kubonakala kwasekwa elikude ukuba eneneni ngobulungisa Ukufudumala ukuba bazibambe, kuba ncakasana ubukhulu becala. Emva kokuchitha kufutshane iiyure 200 uphando iintlobo ogqibeleleyo kunye onobuhle kwimarike, sathenga phezulu 10 iibhodi ezifumanekayo ezivenkileni ekunene lo mzuzu wabalinga inkalo-by-icala ukufumanisa ukuba yeyiphi e-Rubber eneneni bulawula bonke! Siye kwenziwa ezininzi iimvavanyo zombane Rubber ukufumana ukuba yeyiphi iibhodi yiyo kanye skateboards best zombane . An Rubber yombane kwahlukile Rubber eqhelekileyo ngokuthi kubalulekile esihambayo eyenza usebenzisa Rubber lonke Yingxaki enjali le kunokuba kakhulu lula ukuba umkhweli entsha kwaye ibonelela kokoqobo lokukhaba ukuba umgadi onamava. Ixabiso - Njengoko umthetho esisiseko ubhontsi, kunye skateboards zombane ufumana into uhlawulele.
Unethemba. Enyanisweni, skateboards sombane zezona njengenye yeenketho best elihambiselanayo Mile Last zokuhamba. Koowheel ukwazi ngokuqinileyo yazise imbali kwevili Electric Rubber emine motor ngamawele, zisetyenziselwa ngokufutshane abhadulayo umgama njalo njalo. Phakathi kwimbali Velocity eliqhelekileyo-30km / h, ubomi bebhetri ukuze ibe malunga nama-20 ukuya 25km. Uya kukwazi ukufunda ngokupheleleyo Dynacraft yombane ubenemboniselo yangaphezulu Rubber apha. Enoba ufuna makathathe yokuzonwabisa omtsha okanye ukhangele nje yokhangelo opholileyo wamatye, le skateboards coolest sombane zezona apha kuwe ukuze ubone. Ukushwankathela - ukuze wena olukhawulezayo, ethembekileyo kwaye ngaphezu kwabo bonke kakhulu bekhululekile Rubber zombane, ngoko ke koowheel 2 isizukulwana kooboard ke into abakhangela! Inkalo kubalulekile ukuba umfuziselo uthenga kufuneka sinayo na ukukhethwa pre-iseti iindlela wokuhamba. Ezi zixhobo zokuhamba abaphathwayo kwaye sisebenzisa ibhetri egcwalisekayo ezinokuthi zombini kusetyenziswa uhlobo yakho engundoqo yokuhamba okanye zisetyenziselwe ukufumana ukuya nokubuya zothutho. Le longboard ngokupheleleyo isebenzisa lwe Lithium-ion ukuhambisa zip ngakumbi ngenxa longboarding yakho ezonwabisayo, embetha ngezantya ukuya ku 26 mph (42kph) nokusetyenziswa ngokuthe ngcembe.
Ezi skateboards zombane ngawo kulula malini kwaye usebenzise. Le skateboards ephambili zombane ekuqaleni ukuba yenzelwe ukuba kwi iindawo ezifanayo Bikes kunye neemoto. Kukho iweb eninzi enjalo skateboards zombane ngaphandle ezifumanekayo ezivenkileni khona ngoku, ukuba kunokuba dushe ukukhangela ibhodi ukuba akhwele nkqu njengomlinganiso emxinwa ezifana kuphela isantya kwaye ziyahluka. Skateboards zombane kubonelela iingenelo ezinkulu ebomini-style abakhweli yaye flip yonke imihla beya ibe ngamava umdla. Okubalulekileyo uphuhliso kakhulu iteknoloji lenze ezi skateboards zombane. Neekhilomitha emithandathu kungaba uluhlu ngokwaneleyo Abokuqala okuqala kunye nabalandeli, okanye abantu bahambe imigama elifutshane. Mna bayakulangazelela ukuba ilahle ukuba isantya kancinci kakhulu kwaye uluhlu into ngokusenyanisweni ephathekayo.
ixesha Post: Mar-07-2018